သခင် ဘလက်ချော ၏ အလုံးကြီးများ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သခင် ဘလက်ချော ၏ အလုံးကြီးများ (၂)
သခင် ဘလက်ချော ၏ အလုံးကြီးများ (၂)
Posted by black chaw on Mar 7, 2015 in News, Politics, Issues, Society & Lifestyle, Thakhin: CJ Only | 25 comments
သခင် ဘလက်ချော ၏ ဒိုင်ယာလော့များ...။
ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး၏ လက်သည် ကို ဦးခင်ညွန့် ဖွင့်ချလိုက်ပြီ။
မကြာခင်ကမှ ထုတ်ဝေခဲ့သော မှော်ဝန်းသားဦးခင်ညွန့် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) ၏
ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ကျွန်တော့် ဘ၀ အထွေထွေ စာအုပ်တွင် ဒီပဲယင်း ကိစ္စကို အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအဖြစ်အပျက် နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်မသိပါဟု ပြောရင် ကျွန်တော် လိမ်ညာရာ
ရောက်ပါမည်။ ကျွန်တော်က အတွင်းရေးမှူး (၁) ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကလည်း နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော် မသိ၍ မဖြစ် သိပါသည်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ယာဉ်တန်းရှည်ကြီးဖြင့် ရှေ့ပြေး
မော်တော်ဆိုင်ကယ် အုပ်စုကြီးဖြင့် လှည့်လည်ကာ စည်းရုံးရေးတရားတွေ
ဟောနေသည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလို အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အချိန်
ဆိုတော့ အစိုးရ အဖွဲ့အတွက် စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကတော့ အမှန် ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီလိုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ယာဉ်တန်းရှည်ကြီးဟာ မန္တလေးမှ ထွက်ခွာပြီး
လမ်းတစ်လျှောက် စည်းရုံးရေးတရားတွေ ဟောရင်းနှင့် မုံရွာမြို့လည်း ရောက်ရော
ဥက္ကဌက ကျွန်တော်တို့ လူကြီးပိုင်း ငါးယောက်၊ ခြောက်ယောက်ကို သူ့အခန်းသို့
တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို တားဆီးရမယ်
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်ကပဲ အကြမ်းဖက် တားဆီးတာမျိုး မလုပ်သင့်ကြောင်း
ပြောသောအခါ ကျွန်တော့်တင်ပြမှုကို လူကြီးက သဘောမတူပါ။
အဲဒါကလည်း ကျွန်တော့်အတွက် ကောင်းသည်ဟု မြင်ပါသည်။
အဲဒီမှာတင်ပဲ ဒီကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်ကို လုံးဝ တာဝန်မပေးတော့ပဲ
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ကို ဦးဆောင်စေကာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် ကို လိုက်ပါစေလျက် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်
ထိုအချိန် တိုင်းမှူးကတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးနိုင် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုတွေ တော့ မသိတော့ပါ။
သို့သော် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေက တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာ
တိုင်းမှူး၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိတာကြောင့် တချို့ဖြစ်စဉ်တွေကို
ကျွန်တော် သိနေရတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် ဦးဆောင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရခြင်း
မဟုတ်သော်ငြားလည်း ကျွန်တော်သည် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့်မှာလည်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူပါသည်။
ကဲ…။ ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်မှုကြီးရဲ့လက်သည်ကိုတော့ ဦးခင်ညွန့်က ဖေါ်ထုတ်ရေးသားလိုက်ပါပြီ။
ဒီပဲယင်း ကိစ္စသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မသေခဲ့သော်လည်း သေဆုံးသူ အများအပြား ရှိခဲ့ပါသည်။
အခု လက်သည်တရားခံကို သိကြရလေပြီ။
မည်သို့ ဆက်လက် အရေးယူမည်နည်း။
ဟိုတစ်နေ့က တာဝန်လက်ပတ်ပတ်ထားသည့် စွမ်းအားရှင်များက ဆန္ဒပြသူများကို
အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲလိုက်သည့်အခါ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကြီးကို ပြန်လည်အမှတ်ရမိ
ဒီပဲယင်းလို ကိစ္စမျိုးပါလားဟုလည်း တစ်စိမ့်စိမ့် တွေးဖြစ်နေပါတော့သည်။
​ဟေ့လူဂျီး ဟိုဟာ ​ရေနဲ့ ပြန်​မနူးနဲ့ ဂျာ ။ အဲ့ဒါ ​ရေနဲ့ထိရင်​ ​တော်​​တော်​ နံတာ ။
@ naywoon ni ;
အချို့သော အတိတ်တွေဟာ ရေနှူး သလို
ပြန်လည် ဖေါ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်လှပါတယ် ကိုနေကြီးရေ…။
ခင်ညွန့်စကား မှန် မှား ကျနော်မသိ
သို့သော်ထောက်လှမ်းရေးသမားဖြစ်၍ အခြား စစ်သား ဥပမာ ထွန်းကြည် ကျော်ဘတို့နှင့်တော့ မတူပါ ၊
@ တောင်ပေါ်သား ;
ခေတ်ကလည်း သူတို့လက်ထဲက မလွတ်သေးဘူး…။
အဲလို အချိန်မျိုးမှာ မဟုတ်ပဲနဲ့တော့ မောင်ခင်ညွန့် မပြောရဲလောက်ဘူးလို့
လူပြိန်းတွေး တွေးမိတယ် ဗျာ…။
အဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်ထဲရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေး..လွှတ်ကောင်း….
@ Alinsett@Maung Thura ;
ဦးခင်ညွန့် နဲ့ ဒီတစ်ခါတွေ့ရင် မေးထားလိုက်ပါမယ် ခင်ဗျ…။
ဒါမျိုးတွေပါအောင်ရေးရင် ရှစ်ထောင်မဟုတ်၊ တစ်အုပ်တစ်သိန်းဆိုလည်း ဝယ်ဖတ်မယ်
Credit to ကိုထင်
တပ်ထဲစဝင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းသွားတာဘဲပေါ့၊ ဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။ ကျေးဇူးရှင်လို.ပြောလို.ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တင့်ဆွေရဲ.ထောက်ခံမှုနဲ.ဘဲ အဖေကြီး(ဗိုလ်နေဝင်း)ရဲ. ထီးတော်မိုး၊ ဖိနပ်တော်စီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူ.ပါတီညီလာခံဆိုရင်လည်း နောက်ကနေလိုက်ပြီး အရပ်ဝတ်နဲ.လုံခြုံရေးယူပေးရတာဘဲလေ၊ ဟိုတစ်လောကတောင် လူမှုကွန်ယက်မှာတိုက်ပုံအပြာနုလေးနဲ.ကျုပ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတောင် တွေ.လိုက်ပါသေးတယ်။
ဘုန်းမီးနေလတောက်ပခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၃ အောက်တိုဘာလ အာဇာနည်ကုန်းဗုံးကွဲမှုနောက်မှာပါဘဲ။ အဲဒီအချိန်ကထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟာ ဗုံးကွဲချိန်မှာဂေါက်ကလပ်သွားပြီး အရက်သောက် ဂေါက်ရိုက်နေလေရဲ.။ မြောက်ကိုးရီးယားကွန်မန်ဒိုတွေဟာ အာဇာနည်ဂုံးကိုတောင်ကိုးရီးယားထောက်လှမ်းရေးနဲ. စစ်ဆေးရေးအဖွဲ.တွေလာရောက် စစ်ဆေးပြီးတစ်နာရီမပြည့်ခင်မှာဘဲ ပုံမှားရိုက်ဝင်ရောက်လာပြီး မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာ ဗုံးတွေကိုလာဆင်သွားခဲ့တာပါ။ မျက်နှာကျက်ပေါ်ကနေ အောက်ကိုဖြာပြီးကွဲတဲ့အတွက် ထိတဲ့သူတွေဟာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ. NIB ပူးပေါင်းအဖွဲ.တွေစစ်လိုက်ဆေးလိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်ကြတော့ နောက်ဆုံးပုစွန်တောင်ချောင်းထဲမှာဒိုက်ဖုတ်နဲ. ရေထဲကူးမြောပြီးမြစ်ဝကမြောက်ကိုးရီးယားသင်္ဘောဆီ ပြေးဖို.လုပ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကင်မင်ချူးကိုအရှင်မိတော့တာပါဘဲ။ ဒါကလဲထောက်လှမ်းရေးကကောင်းလွန်းလို.တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ချောင်းထဲငါးထိုင်မျှားနေတဲ့သူတွေ ဝိုင်းဖမ်းကြလို.ပါ။ အဲသလိုနဲ. အဖေကြီးက ‘ဟေ့ ငါတို.ထောက်လှမ်းရေးထဲ အရက်မသောက် ဂေါက်မရိုက်တဲ့ကောင်ကိုတင်ကြမယ်’ ဆိုပြီးတင်ကြလို.အဲဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တာပါဘဲ။
ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ.ကတော့ ၈၈ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတော့တန်ပြန် အဖျက်အမှောင့်တွေအဓိကလုပ်တာပေါ့လေ။ ကျောင်းသားတွေထဲ၊ ဆန္ဒပြသူတွေထဲ ထောက်လှမ်းရေးဆဲလ်တွေစိမ့်ဝင်ပြန်.နှံ.ပြီး အေးအေးဆေးဆေးဆန္ဒပြနေသူတွေကို ဒေါသထွက်အောင်ဆွပေး၊ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးလာအောင်လမ်းကြောင်းပေး၊ နောက်ကုန်သွယ်ရေးရုံးအပေါ်ကနေလူအုပ်ထဲကိုသေနတ်နဲ.ပစ်သွင်းတာ၊ ဆေးတိုက်ထားတဲ့အသေခံတွေကို ခေါင်းဖြတ်ဖို.လမ်းကြောင်းပေးတာ၊ ဂိုဒေါင်တွေကို စစ်တပ်ကဦးဆောင်ပြီးဖောက်ပြပေးတာ အဲဒါတွေလုပ်ရတာပေါ့လေ။ တစ်ဆက်ထဲဘဲ အာဏာသိမ်းဖို.ကစီစဉ်ပြီးသား၊ အဲဒီဗိုလ်စောမောင်ဆိုတာ လူအုပ်ကိုမပစ်ရဲလို.အတင်းကိုဖိအားပေးခဲ့ရတာကလား၊ နောက်ဆုံးတော့သူလဲအရက်တွေဖိသောက်ပြီး ပစ်မိန်.ပေးခဲ့ရတာဘဲလေ။ အဖျက်အမှောင့်တွေထည့်ပေးလိုက်တော့ ဆူဆူပူပူလုပ်သူတွေဆိုပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုအသရေဖျက်လို.ရတာပေါ့၊ နို.မို.ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲ။ ကျုပ်တို.အားလုံးသေကုန်မှာပေါ့။ အဲဒီတုန်းကဗိုလ်စိန်လွင်ကတော့ လူသတ်သမားပီပီပြတ်တယ်၊ ‘ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို.လူတစ်သောင်းထက်ပိုမသတ်ရဘူး၊ ဒီအရေးအခင်းငြိမ်သွားလိမ့်မယ်’ လို.ပြောခဲ့သေးတယ်။ အာဏာသိမ်းရင် တောခိုမယ့်ကျောင်းသားတွေရှိနေတာကို ကျောင်းသားတွေထဲထည့်ထားတဲ့ဆဲလ်တွေကနေ သတင်းတွေကလည်းတက်နေပြီဆိုတော့ ရုပ်သိပ်မရင့်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးဆဲလ်တွေကို ကြိုပြီးနယ်စပ်တွေဆီကြိုတင်ပြီး ပို.ထားပြီးသားပေါ့လေ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ.တွေ.တဲ့အခါ သူတို.ကကြိုတင်ရောက်နှင့်နေတာမို. ဝင်လုံးရတာပိုလွယ်သွားတာပေါ့၊ ဒါနဲ.ဘဲ မိဘရပ်ထံပြန်ကြမယ့်ကျောင်းသားတွေဆိုပြီး ABSDF အင်အားတွေကိုဖဲ့ထုတ် ဖြိုခွဲပစ်ခဲ့တာပါဘဲ။ မြို.ပေါ်မှာမြက်ခင်းသစ်ဆိုပြီးထောင်ပေး၊ သူတို.အမာခံတွေကို အခွင့်အရေးတွေပေး၊ ရန်ကုန်မြို.ထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေးစုရပ်တွေအဖြစ် အသုံးပြုလို.ရမယ့်နေရာတွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးထားတာပေါ့လေ၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထဲက သုံးရာသီဆို သာမန်ပြည်သူတွေတောင်သိတယ်။ ဒါကတော့ Open Secret သဘောမျိုးနဲ.လွှတ်ထားရတာပေါ့။ မိဘရပ်ထံပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို သေသေချာချာကြိုပြလိုက်တော့ မိဘတွေလည်းကျေနပ်ကြတာပေါ့၊ ပြီးတော့မှအလားအလာရှိတဲ့သူတွေကို သေသေချာချာစံနစ်တကျဖမ်းတာ စစ်တာတွေလုပ် ထောင်ထဲထည့် ဆေးထိုးသတ် အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန်တင်မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ.အဲဒါမျိုး နှစ်နဲ.ချီပြီးစစ်ဆင်ရေးပုံစံလုပ်လိုက်တာ ငြိမ်ဆင်းသွားတာပေါ့၊ အသေအပျောက်တွေကတော့ရှိတာပေါ့လေ၊ အရွယ်ကောင်းတွေသေကြတာပေါ့၊ သူတို.မိဘတွေကိုလည်း ဖိအားအမျိုးမျိုးပေးပြီးအလုပ်တွေကထုတ်ပစ်တာပေါ့၊ ဒေါက်တိုင်မှန်သမျှရိုက်လဲပစ်တဲ့သဘောပါဘဲ။ အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်လာနိုင်မယ့် အတွင်းစည်း အပြင်စည်းတွေသတ်မှတ်ပြီး သေသေချာချာရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားပစ်တာပေါ့လေ။ အရေးအခင်းနဲ. အဲဒီစစ်ကြောရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ သေတဲ့သူတွေသောင်းဂဏန်းရှိမှာပါ။ ဗိုလ်စိန်လွင်ဟာ တကယ်အမြော်အမြင်ကြီးပါတယ်၊ သူပြောတဲ့ဂဏန်းလောက်သေပြီးတဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်ဟာအတော့ကိုငြိမ်ဆင်းသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးလူထုစိတ်ကိုအာရုံပြောင်းဖို. Burma, Burmese, Berman စတာတွေကို Myanmar လို.ပြောင်း၊ အဲဒါကလည်း ဂဏန်းဗေဒင်ကိုသေသေချာချာတွက်ပြီး လုပ်လိုက်တာပါ၊ အဖေကြီးကအဲဒါကိုယုံတယ်လေ၊ ဦးမြိုင်လည်းရှိနေသေးတယ်၊ ဝေဒအဖွဲ.က၊ ဦးမြိုင်နဲ.ကျုပ်ဆရာဗိုလ်တင်ဦးတို.ဆိုတာ ငယ်ပေါင်းတွေ၊ ဗိုလ်စိန်လွင်နဲ.လည်းအတော့ကိုရင်းနှီးတာပါ၊ တစ်ခါက ဗိုလ်စိန်လွင်ကသူ.အိမ်ကခွေးကလေးမွေးတာကို ဇာတာကောက်ဖွဲ.ပြီး ‘မောင်မြိုင်မင်းဟောစမ်းပါ’ ဆိုပြီး ပို.ဖူးသေးတယ်၊ ဦးမြိုင်ကလည်းမခေဘူးဗျာ့၊ ‘ငါ့ကိုလူဇာတာမဟုတ်တာတွေ လာမပို.နဲ.’ ဆိုပြီးတောင်တုန်.ပြန်လိုက်သေးတယ်။ ထားပါတော့။ ရပ်ကွက်တိုင်းကို သန်.ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလိုက်၊ ထုံးသုတ်ခိုင်းလိုက်၊ ဧည့်စာရင်းစစ်လိုက် အဲဒါမျိုးတွေမရိုးအောင် ခိုင်းတာပေါ့လေ၊ အရေးအခင်းတုန်းကရဲရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြို.နယ်တွေ၊ အရပ်သားတွေကိုသေသေချာချာအကွက်ချပြီးအမှည့်ခြွေခြွေ၊ စစ်တပ်ကအမာခံတွေထိုးထည့်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးတွေ မြို.နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေထဲကို တပ်ထွက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေခန်.ထား၊ ခရိုင်ဆိုပြီးသေသေချာချာပြန်ဖွဲ.၊ စစ်ဒေသမှူးတွေနဲ.တွဲထားပြီး သတင်းမှန်သမျှတက်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ လှေပွဲတို. မြင်းပွဲတို. အားကစားပွဲတို.လုပ်၊ မြန်မာ့အသံကနေအဆက်မပြတ်ဝါဒဖြန်.၊ မြန်မာ့အသံလောက်နဲ. မရနိုင်တော့ မြဝတီကိုထောင်၊ လူထုကို တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ. မြောနေအောင်လုပ် အဲဒါတွေဆက်တိုက်လုပ်ရတာပါဘဲ။
ဒီလိုနဲ.ဘဲထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်ကြီးကကြီးလာတော့တာပေါ့၊ အာဏာကိုခြိမ်းခြောက်မယ့်ကိစ္စကလွဲလို. အကုန်လုပ်ခွင့်ပေးထားခြင်းကတပ်အချင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေးကိုမုန်းဖို.ဖြစ်လာတာပါဘဲ၊ ကျုပ်ကလဲသတင်းသာတက် အခြားကိစ္စအတော်များများကိုလျစ်လျူရှုထားလိုက်တော့တယ်။ နေရာတကာတီဗီမှာ ကျုပ်မျက်နှာပါတာကို မှန်တာပြောရရင် အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်၊ ငယ်ငယ်ကမင်းသားဖြစ်ချင်ခဲ့တော့ အခုတီဗီမင်းသားဘဝကိုသာယာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နောက်တက်တိုင်းမှူးတွေဟာ အတော်ကိုဆိုးလာပါတယ်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ.မိသားစုကလည်း ပိုပြီးကဲလာပါတယ်၊ ကျုပ်နဲ.ငြိတာကတော့ ၂၀၀၃ ဒီပဲယင်းကိစ္စပေါ့၊ ကျုပ်သာကိုင်တွယ်ရရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်စိုးဝင်းက မိုက်တိမိုက်ကန်းနဲ. ဟိုဝဲလောင်သားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလျှောက်လုပ်လို. ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းတွေဖြစ်လာတာပါ။ ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်ပေါ်ကစက်ထဲကို “ဒေဝတို.လွှတ်သွားပြီ” ဆိုတဲ့ဗိုလ်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ပို.တဲ့သတင်းတက်လာတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေဆိုတာ အရုပ်ကြိုးပြတ်ဘဲ။ နောက်တော့လဲကျုပ်ဘဲအားကိုးရတာဘဲမဟုတ်လား၊ ကျုပ်ကလည်းအဲဒီအခါက ကမ္ဘာမှာခေတ်စားနေတဲ့ Road Map ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ.ရောကြိတ်ပြီး ဒီပဲယင်းကို မှိန်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒီလူတွေကျေးဇူးကန်းတယ်ဗျာ့၊ သူတို.ခိုးချင်တိုင်းခိုးမရတာကို အခြားအကြောင်းပြုပြီး ကျုပ်ကိုဆွဲစေ့ကြတာ၊ ‘ခင်ဗျားအိမ်ပြန်တော့’ လို.ပြောတဲ့ အရက်သမားရဲ.အဲဒီနေ.ကမျက်နှာထားကို ကျုပ်တစ်သက်မမေ့ဘူး။
တကယ်တော့ ကျုပ်တို.တွေကြိုတင်ခန်.မှန်းမိလျက်သားနဲ. ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး၊ တကယ်တော့ “ကျားဖင်ကို ခွေး -ိုးတာပါဗျာ” တကယ်ကြေကွဲတယ် ။ ။
(မှတ်ချက်။ ။ မင်းတို.ကောင်တွေတပ်ထဲဝင်ချင်ရင်ဝင် ငါမတားဘူး၊ ဒါပေမယ့် အင်မတန်စောက်ကျင့်ယုတ်ပြီး ညစ်စုတ်တဲ့ထောက်လှမ်းရေးထဲတော့ ဘယ်တော့မှ မဝင်လေနဲ. ဆိုတဲ့ ဖခင်စကားကို အမှတ်ရလျက်။)
လူမိုက်ခင်ဇော်ဆိုဒဲ့ကောင်က ကူမြူ နစ်ထင်တယ်…။ မေမေစုက သင်ပုန်းချေ တယားဟောနေဒါ ဒင်းက ဆူဆူပူပူ လိုက်လုပ်တယ်..။
အွန်လိုင်းက ဥကြောင် ရဲ့ လှိုင်းမိလို့ သင်ပုန်းချေရမဲ့ အစား လက်စားချေချင်စိတ် ဝင်လာတာပါ။
@ Khin Zaw ;
ဟော့…။ ဖတ်သွားပါတယ် ခင်ဗျ…။
ဗခစိုးဝင်း သွေးကင်ဆာနဲ့သေသွားတယ် ဆိုတော့ နာ့နှယ်ပျော်ထှာ… ဘာပဲပြောပြော ဒေါ်စုကို ပိုးစိုးပက်စက် ကြံသူတွေ ပိုးစိုးပက်စက်တွေဖြစ်သွားကြတာ အရှင်ထွက်နဲ့ အသေထွက်ပဲ… ကျန်တဲ့သူတွေစောင့်ကျိရအူးမယ်…
@ Wow ;
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ဇာတ်သိမ်းမလဲ ပေါ့နော်…။
မမဝေါင်း တစ်ယောက် ဖေ့စ်ဘုတ်က ပျောက်နေလို့
မစားနိုင် မသောက်နိုင် လွမ်းဖျားလွမ်းနာ ကျနေသူတွေ
မမဝေါင်းအနေနဲ့ ရောက်ရာ အရပ်က အမြန်ပြန်လာဖို့
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ တောင်းပန်ပါရစေ…။
ဦးခင်ညွန့် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လိုလား တဲ့ သူ ဆိုတာ ကိုတော့ သူ အဖမ်းမခံ ရခင် မင်းသား လို ခပ်ကြွကြွ ဘဝ မျိုးမှာထဲ က သိဖူးပါတယ်။
အဲဒါ ကို ဟိုဘက် က လက်ဦးသွားတာ။
တစ်ချို့ (တော်တော်များများ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လိုလား နေသူ တွေ ရှိပြီး သူတို့ ထဲ မှာ အားပြိုင် နေပါတယ်။
အဲဒါ ကို သိလို့ နိုင်ငံပြင်ပ က မြန်မာပြည် ကောင်းစား သွားမှာ ထက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာ တစ်ခု ရသွားမှာ ကို မရှုစိမ့် နိုင်သူများ အလုပ်မဖြစ်အောင် သွေးထိုးခြင်း အမှု ကို ပြု နေတာပါ။
ဒီတော့ အစိုးရထဲ က သဘောထား တင်းမာ သူ များ ရဲ့ အကြိုက်ပေါ့။
ကျွန်မ တို့ လူမျိုး ဆိုတာ က ဘုန်းကြီး နဲ့ ကျောင်းသား ဆို အပြစ်မမြင် အချစ်ဝင် တတ်တော့ ဒီ လို လူများ ရဲ့ ကစားကွက် ကောင်းကောင်း ပေါ့။
လောလောဆယ်တော့ ဓာတ်ပုံ တွေထဲ ကျောင်းသား အရွယ် က နဲနဲ၊ ဦးလေး အဒေါ် အဖေ အမေ တွေ က ခပ်များများ ဘဲ။
မြန်မာပြည် ပညာရေး ညံ့ ပါတယ်။ တော်တော် ကို သုံးမရ အောင် ညံ့ နေပါတယ်။
ဒါ ကို လူများစု လက်ခံ တယ်။
ဒီ အုပ်ချုပ် နေတဲ့ အစိုးရ ညံ့ပါတယ်။ တော်တော် ကို သုံးမရ အောင် ညံ့ နေပါတယ်။
ဒါကိုလဲ လူများစု လက်ခံ တယ်။
ငယ်ငယ် တုံး က ဂေါ်လီ နဲ့ အရုပ် ပစ်ဖူး ကြမှာပေါ့။
နောက်တန်း က ဟာ တွေကိုအားလုံး စားချင်ရင် ခေါင် ထိမှ ရမယ်။
အခု လဲ ဘယ်ဟာ ကို ထိ အောင် ပစ် ရမလဲ။ ဒါပါဘဲလေ။
အခု မြင်နေရပြီ။ ခေါင် ထိ မှာ စိုး လို့ ကို အာဏာရှင်လက်ပါးစေများရော၊ မင်းသားကြီး မလုပ်ရသူများပါ နှစ်ဖက် လုံးက ပုံစံမျိုးစုံ နဲ့ ဖျက်နေကြတာ။
ကျောင်းသား က ကျောင်းသား အစစ် ဆို တန်ဖိုး တက်ပြီးသား။
ဘုန်းကြီး က ဘုန်းကြီးအစစ် ဆို တန်ဖိုးတက်ပြီးသား။
ကျောင်းသား နာမည်ခံတိုင်း ၊ ဘုန်းကြီး နာမည်ခံ တိုင်း တော့ တန်ဖိုး ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
နောက် က ဖျက်မြင်း တွေ ရဲ့ ကြိုးဆွဲ လက် တွေ မြင်နေရတယ်။
@ မြစပဲရိုး ;
ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ…။
မာတင်လူသာကင်းတို့.. ကနေဒီတို့.. လုပ်ကြံအသတ်ခံရတာပဲ..။
တချို့ကိစ္စတွေက.. တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိရင်… အရေးကြီးတဲ့..ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က.. ခွင့်လွတ်ရင်… ခွင့်လွှတ်ပစ်လိုက်သင့်လှတယ်..။
စိတ်ထဲတော့ တောင်းပန်ကြေအေး.. လူ့သားဆန်.. မဟာဝါဒကိုယုံကြည်ပါတယ်..။
ဒေါ်စုကို.. လုပ်ကြံသူတွေထဲပါတဲ့.. တာဝန်ရှိသူတချို့.. ၀န်ချတောင်းပန်ပြီးပြီလို့.. ထင်ပါကြောင်းနဲ့.. ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်ခွင့်လွှတ်ထားတယ်လို့လည်း.. ထင်ပါကြောင်းရယ်…။
အဲဒီအချိန်က.. ဒေါ်စုကားမောင်းတဲ့.. ယဉ်မောင်းက.. အခုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာနေတယ်..။
သူ့ကိုဒေါ်စုကပြန်ခေါ်နေသမို့.. ပြန်ချင်တာ.. မြန်မာပြည်က.. ပြန်ခွင့်မပေးသေးပါတဲ့..
သတင်းကြားသူများ.. လုပ်နိုင်သူများ.. လုပ်ပေးရင်ဖြင့်.. သင်ပုန်းချေရေး… ပိုလှမယ်လို့… ထင်..။
ခွင့် မလွှတ် ဘူးလို့ ပြောနေတာမျိုး မဟုတ်ရပါဗျာ…။
တောင်းပန်တော့ တီတိုးတိတ်တိတ် တောင်းပန်တာမျိုးတော့
အမှုကလည်း ပေါ့သေးသေးအမှုမှ မဟုတ်တာပဲ…။
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် မကွယ်လွန်ခင်က ဦးခင်ညွန့် နဲ့
ပြည်သူလူထုကို တရားဝင် မတောင်းပန်ရသေးပါဘူး…။
ဒင်းတို့ကို ထောင်အနှစ် လေးငါးဆယ် ကျတာကို လိုချင်တာမဟုတ်ရပါ…။
ဒင်းတို့ မှားခဲ့တာကို မှားပါတယ်လို့ ၀န်ခံရုံ တောင်းပန်ရုံနဲ့
@ မွသဲ ;
ညီးမလည်း ရန်ကုန်-တွံတေး သင်္ဘောဒရိုင်ဘာ ကတော်ဖြစ်နေပြီး
တစ်သောင်းလောက်ကို စာရင်းထဲ ထည့်ပြောနေရသေးအေ…။
ဖတ်ပြီး ကျုပ်ကို ငှားဦးအေ…။
ဒီpostရေးနေရင်းတဲ့အချိန်မှာပဲ လေးဖြူရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၅
“ဟိုတစ်ကွက် သည်တစ်ကွက် ပိတ်သားထက် အရင်လိုကြည့်မကောင်းပေမယ့်မြင်ရတယ်..
အဓိပ္ပါယ်မရှိတာ သိလည်းပဲ တစ်ခါတလေတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတော့…..”
သာရမရှိပါဘူး။ပညတ်တွေပြန်အာရုံပြုရတာ ပင်ပန်းတယ် ဆိုတာကိုလည်းသိနေပါတယ်။အချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီလားဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ စိုးရိမ်ပြီးသတိပေးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
စေချင်ဘူး။ပြီးခဲ့တာတွေပြီးခဲ့ပြီပဲကွာလို့ နှစ်သိမ့်ရအောင်လောက်တော့လည်းကျွန်တော် မပျော့ညံ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်သိစေချင်တာကလူတစ်ယောက် ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရုတ်တရက်ကြီးရောက်သွားနိုင်အောင်
ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်၊ကိုခိုင်ထူး၊လေးလေးဝါးနဲ့Aurora အဖွဲ့ကိုပက်ထရစ်တို့ ကြိုးစားဖန်တီးခဲ့တဲ့
တေးရေး မြသန်းစံ တေးဆို ခိုင်ထူး /လေးလေးဝါး
Cho: ဒို့ ဒို့ ဒို့တွေ အမြဲသတိရှိကြမယ်
ဒို့ ဒို့ ဒို့တွေ သမိုင်းပေး ညီအစ်ကိုများ
D: ကမ်းလက် လှမ်းသောလက်တွေ ဆုံတွေ့ပြီ
မှောင်မိုက်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်အလင်းတန်းတွေ့ရင်သိလိမ့်မယ် ကြင်နာခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ် အပြုံးများသက်သေသိလိမ့်မယ်
Cho:A B D Cho
များများရောက်နှင့်နေတော့ မေတ္တာတရားနဲ့ သစ္စာတရားလေးပါးကိုလည်း ယုံကြည်သက်ဝင်မှုမြင့်မားလာပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ မဟာကရုဏာာတော်ကိုမှန်းဆကြည်ညိုမိတိုင်း မျက်ရည်တွေမစဲနိုင်အောင် တဖြိုင်ဖြိုင်ကျနေရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။
သဒ္ဓါတရားကသိပ်ထက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျင့်အားနည်းနေသေးတော့ပညာကနောက်ကမလိုက်နိုင်
ဒါပေမယ့် သမာဓိအရှိန်ကြောင့်တော့ အတန်အသင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းနေပြီ။
မယ့် ဝန်ထမ်းဘဝတန်းလန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ ရုန်းထွက်လို့မရပြန်သေးဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်းသားသမီးနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်က၆တန်း၊ တစ်ယောက်ကမူကြို၊
ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ အထွေထွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့မွန်းကြပ်နေတယ်။
ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲ။စိတ်မွန်းကြပ်လာတိုင်း ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့တရားတွေနာ တရားတွေဖိထိုင်ဆိုတော့တရားသားကတော့အတော်
တပ်ကလည်းနီးတော့ ဆရာတော့်ဆီမကြာခဏရောက် ရင်ဖွင့်ပေါ့လေ။
သီချင်း audio ခွေလေးကိုင်ပြီး ကိုတင်သန်းဦးနဲ့ကျွန်တော်
Colonel ကြီးက အခုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် လုပ်နေတဲ့သူပါ။သူ့ကို ကွန်ပျူတာစီထားတဲ့သီချင်းစာသားတွေ
“မြသန်းစံ မင်းသီချင်းက လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်တဲ့စကားလုံးလည်းမပါပါလား
“ဖြစ်ပါ့မလားကွ မင်းဟာက တော်ကြာအပြောခံနေရဦးမယ်”
“ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက နားလည်မှုရှိပါတယ်”
ဒီလိုနဲ့ပဲအင်တင်တင်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကိုတင်သန်းဦး မှူးကြီးရုံးခန်းထဲရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့…
ရုံးခန်းထဲမှာ ဒုချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမောင်အေးနဲ့အတူ
အတွင်းရေးမှုး၂ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦး၊ အတွင်းရေးမှုး၃
မှူးကြီးကတော့top table မှာထိုင်လို့ပေါ့။အခန်းထဲမှာကျွန်တော်ရာထူးအငယ်ဆုံးပဲ။
“အေး ကောင်းသားပဲ မင်းဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲ”
“ဒီနေ့ညနေ ကျွန်တော့်တပ်ထဲမှာ မြဝတီရုပ်သံအဖွဲ့နဲ့TVရိုက်ပါမယ်။မြန်မာ့အသံတိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်က ကလေးတွေကိုလည်းတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေနဲ့
အဆိုတော်တွေနဲ့ တွဲရိုက်ဖို့ခေါ်ထားပြီးပါပြီ night scene ကို မီးပုံပွဲလေးနဲ့ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်”
(ဖတ်ထားနှင့်ပါ ကျွန်တော်ဆက်ရေးနေပါသည် ယနေ့
အပိုင်း ၂ ဆိုတော့ ဟတ်ကော့ကြီးအေ…။
အပိုင်း ၁ လည်း လုပ်ပါဦး…။
အပိုင်း ၃ ရရင်လည်း ဖတ်ချင်တယ်…။
မြသန်းစံ – လုံးဝမရေးချင်ဘဲ ရေးရတဲ့စာ
တော်တော်များများလည်း သိကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ဓမ္မဆိုင်ရာစာပေနဲ့ပဲမွေ့လျော် မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင် ဆောက်တည်ရင်း နေလာခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာပါပြီ။
စစ်မျက်နှာမှာသေကောင်ပေါင်းလဲ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရန်သူကို ၁၉၉၉ခုနှစ်ရောက်တော့
လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မယ် လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာ တာဝန်ပေးချက်အရ ကျွန်တော့်ဘက်က စေတနာပါပေါင်းထည့်ပေးပြီး“ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်း”ဆိုတဲ့သီချင်းကို
ရေးပေးခဲ့ရတဲ့သူပါ။အဲဒီတုံးကအဲဒီတိုက်ပွဲမှာ မအူမလည်နဲ့ကျွန်တော်သာကျဆုံးခဲ့ရင် “ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်း” သီချင်းထွက်လာမှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်လည်း သီချင်းရေး
တွေမှာ အဲဒီသီချင်းဖွင့်ပြီးဆိုကြ ကကြတယ်လို့ ခပ်ဝေးဝေးပဲကြားနေရပါတယ်။
အဲဒီတုံးကအခုလို Mediaတွေသိပ်မထွန်းကားသေးတော့ တလောက ဖြစ်ခဲ့တဲ့
‘ လောက်ကိုင်စစ်ပွဲ ‘ပုံရိပ်တွေလို ပြည်သူတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီသိခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေမြုပ် အမိန့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲဘော်တွေရဲ့
စစ်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုကိုယ်ချင်းစာနားလည်စိတ်နဲ့ ခံစား
နေရချိန်မှာတော့ တချိန်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မျက်ရည်သုတ်ပေးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်
ရဲဘော်တွေရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေဟာ အခုတော့ မျက်ရည်တွေခြောက်ခမ်းလို့
တက္ကသိုလ်ကျောင်သားဘဝ(၁၉၇၄-၇၈)တုံးက ကြုံခဲ့ရတဲ့ဦးသန့်အရေးအခင်း ၊သခင်
ကိုယ်တော်မှိုင်းရာပြည့်ပွဲတွေတုံးက ဆံပင်ရှည်ရှည် ဝေလေလေဘဝနဲ့ လုံခြုံရေး
ဟာ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်လို့ တိုက်ပွဲတွေမှာ အသက်ပေးသွားကြတဲ့ ရဲဘော်
တွေကို ကိုယ်တိုင်မြေမြုပ် အမိန့်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာ နောင်တကြီးစွာနဲ့အရမ်းကို
အခုလေးတင်ပဲ ပလပ်စတစ်စခင်းပြီးထမင်းကြမ်းခဲနဲ့ သဲတရှပ်ရှပ်ပဲဟင်းကို မြေကြီး
ပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်စားနေရပြီး ကျွန်တော့်ရဲဘော်မြေကြီးထဲရောက်
နေပြီ။ သူ့အလောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်က ထမင်းကြမ်းခဲထိုင်စားနေရသလိုပါပဲ။
တွန်းအား အကြောင်းတရားတွေမှန်း အဲဒီတုံးကတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ သောင်းကျန်းသူတွေကအလင်းဝင် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းတွေလုပ် ကြီးပွားချမ်းသာပြီး လူကြီးတွေနဲ့တခမ်းးတနားအတူတွဲပြီး Cheers
လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါက အဆင်ပြေရာ တောတွင်းတစ်နေရာမှာ မြေမြုပ်ခဲ့ရတဲ့
တစ်ခါကျောင်းသားတွေဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြန် တော့လည်း ၁၉၆၂ခုနှစ်
ကတည်းက မိုင်းခွဲခံခဲ့ရလို့ မကျေမနပ်နဲ့ဘဝကူးခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်
တွေဟာ ၁၉၇၄ ဦးသန့်အရေးအခင်းရောက်တော့ တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၇၅ သခင်
ကိုယ်တော်မှိုင်းရာပြည့်ရောက်တော့တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၈ (၈လေးလုံး) အရေးအခင်း
နေလိုက်ကြတာ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ကြားရတဲ့အရိုးတွန်သံပဲလို့တွေးဆမိပါတယ်။
ဒီမီးတွေကိုအစိုးရအဆက်ဆက်တာဝန်ယူသွားခဲ့ကြသူတွေဟာ တာဝန်ရှိရက်နဲ့ ငြိမ်းအောင်မငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြဘူး။နောက်မျိုးဆက်ကို “မီးတုတ်”တွေအမွေပေးခဲ့ကြ
တယ်။ ၁၉၈၈မှာသမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဟာ ပညာရှိပီပီ မီးငြိမ်းနိုင်
အုတ်မြစ်ချပါစို့” လို့ကျေညာခဲ့ပေမယ့်စိတ်ကြွဆေးကျွေး၊ ထောင်တံခါးဖွင့်၊ အရပ်ထဲ
ဝင်မွှေ၊ ဂိုဒေါင်ဖောက်၊အရေးအခင်းကိုပုံဖျက်၊တိုင်းပြည်ပျက်တဲ့ ကိန်းဆိုက်လေ
ဟန်ဖန်တီးပြီး အခြေအနေဆိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့် စစ်တပ်က
အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့ ကြေငြာချက်လည်း အသက်
ဒီလိုနဲ့ပဲကျောင်းသားနဲ့အစိုးရ၊ ကျောင်းသားနဲ့စစ်တပ်ဟာ အစေးကပ်တယ်လို့မရှိ
တော့ပဲ အစိုးရအဖွဲ့တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း နောက်ထပ်လူသစ်တွေ ဘယ်သူပဲ
အာဏာရလာ ရလာ ရန်မီးဟာအခုအချိန်အထိမငြိမ်းနိုင်တော့ပဲ အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပညာရေးသပိတ်အထိရှည်လျားလာခဲ့တာဘယ်ကာလကျမှ အဆုံးသတ်မယ်
ဒါတွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်မြန်မာပြည် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာပဲဖြစ်နေကြတာပါ။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲက လူတွေပဲနစ်နာကြ ၊ဒဏ်ရာရကြ၊ အသက်တွေပေးကြရ၊ စစ်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးရ ၊ ကျောင်းသားတွေအဖမ်းခံကြရ၊ ပညာသင်ခွင့်တွေ
မရခဲ့ကြ၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်းပြည်မှာပညာတတ်တွေကနည်းပါးလာ ၊ ပညာတွေ
ကောင်းကောင်းသင်ခွင့်မရတော့ ဆင်ခြင်တုံ တရားတွေနည်းပါးလာ၊ စီးပွားရေး
ကမပြေလည်၊ ဝင်ငွေအတွက် မနည်းရုန်းကန် ရှာဖွေနေရတော့ မကျေမနပ်စိတ်က
နိုင်ငံရေးပေါ်လစီပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ဘိန်းနဲ့အသက်မွေးခဲ့တဲ့သူတွေ ကနေ့ချင်း
ညချင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်လာကြတဲ့ အချိန်မှာတိုင်းပြည်ထဲက သာမန်
လက်လုပ်လက်စားတွေရဲ့ ဘဝကတော့ မွဲပြီးရင်းမွဲ ပြာကျပြီး ရင်းပြာကျနဲ့ ဘယ်တော့
ထိုက်တန်တဲ့နေရာမရှိတာရယ် ဒီရောက်ပြန်ရင်လည်း ဘာမှမတတ်ဘဲနဲ့အပေါ်စီး
ကနေ အာဏာပြတာမခံချင်တော့လို့ ဘယ်သူမှမလာချင်တော့ဘူး။မြန်မာပြည်
ပြန်ရောက်ပြီး ထူးမခြားနားပတ်ပျိုးကြီးနားထောင်နေရတာထက်စာရင် နိုင်ငံခြားမှာပဲ
တည်ငြိမ်နေတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်ပညာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ခွင်မှာ
Pop Music လေးနဲ့ပဲငြိမ့်နေတော့မယ် ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုချင်တော့
တိုင်းပြည်ကြီးကို ကျွန်တော်အပါအဝင် ဖိုးသုည အများစုနဲ့လည်ပတ်နေရတော့ကမ္ဘာ့
အလယ်မပြောနဲ့ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာတောင် ကျွန်တော်တို့ အလည်
အပတ်ရောက်တဲ့အခါ မျက်နှာခပ်ငယ်ငယ်ရယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုလည်း နည်းပညာ
မြင့်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ (စေတနာလည်းပါတဲ့) အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုပြေးကြရ၊ ပညာရေး
ဆိုလည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကိုပြေးကြရပြန်၊ သွင်းကုန်ဆိုလည်း သူတစ်ပါးကိုအားကိုးရ၊
ထုတ်ကုန်ကျပြန်တော့လည်း မတန်တဆဈေးအနှိမ်ခံရပြီး ကုန်ကြမ်းသက်သက်
ရသလို ရှက်လည်းရှက်ပါတယ် မရှက်လည်းမရှက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒီပြဿနာတွေအားလုံးပြေလည်သွားဖို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ယူထား
တဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်မြေပုံဆိုတာ
“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား“ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့
ဝါးစားဖို့ကျားရဲကြီးတွေ အစွယ်တဖြီးဖြီးနဲ့စောင့်နေတာကို မြင်အောင်ကြည့်ကြပါ။
(၂) တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေအပေါ်မှာ ကျားကစားသလို လှည့်ကွက်တွေနဲ့ဥာဏ်မများဖို့လိုပါတယ်။
(၃) ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲက human resources တွေကိုစံနစ်တကျအသုံးချတတ်ဖို့
(၄) အရေးအကြီးဆုံးကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပရိယာယ်မပါတဲ့ရိုးသားဖြူစင်မှု သစ္စာရှိမှုနဲ့ မေတ္တာထားတတ်မှုတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။
(၅) တာဝန်အရ Onlineတွေပေါ်မှာ Account မျိုးစုံတတ်ပြီး ရေးနေကြသူတွေအနေ
နဲ့ Hate Speeches တွေတတ်နိုင်သမျှရပ်တန်းကရပ်ကြပါတော့လို့လည်း မေတ္တာ
ရပ်ခံချင်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဆဲဆိုနေကြတဲ့သံသရာမဆုံးနိုင်သရွေ့ နောက်ဆုံး
နစ်နာတော့ ကိုယ်တွေချည်းပါပဲ ဆိုတာကို အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုနေပါပြီ။
(၆) ယုံကြည်ထိုက်သူက ယုံကြည်အောင်နေပြလိုက်ပါ။ အခုဖြစ်နေသမျှအားလုံးဟာ အယုံကြည်မခံရလို့ဖြစ်ကြတာပါ။ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့စိတ်အခြေခံကဒီလောက်မညံ့
ပါဘူး။ ပြေလွယ် ပျောက်လွယ် ကျေအေးလွယ်ပါတယ်။ အရှိန်အဝါကိုကိုင်ပြီးတင်းခံ
တောင်အတော်လွန်လှပါပြီ။ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ရန်ကုန်နဲ့နေရာအစုံ
မှာဖြစ်နေသမျှမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်မချမ်းသာလွန်းလို့ ဒီစာကိုရေးလိုက်
ရတယ်လို့မှတ်ပါ။ ပညတ်တွေအာရုံပြုရတာပင်ပန်းလှပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပရမတ်
ကသောင်းကနင်းဖြစ်နေတာတွေ လှမ်းတွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားရာ
အဲဒါက ဘာကိုပြောတာလဲ။ အဆုံးထိဖတ်တာတောင် သဘောမပေါက်လို့ပါ။
ဒါ က အရင်ဖတ်ရမယ့် အပိုင်းး ၁
ပြီးးးမှ အပေါ်က ဟာကို ဖတ်ရမှာ
အပိုင်းး ၃ က မရသေးးဘူးးး
ဒီနေ.status ရေးဖို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပထမဦးဆုံး
“ဦးမြသန်းစံ ခင်ဗျား ဗောဓိမြိုင်လိုဖြစ်ချင်လားဗျ”
“စာမရေးတော့ဘူးဆိုပြီး ဗလာစာအုပ်တွေ ဘောလ်ပင်တွေ
ဗီရိုထဲထည့် သော့ခတ်သိမ်း တော်ကြာနေ ဒါလေးတော့ရေးအုံးမှပါပဲလေ”ဆိုပြီးဗီရို ထဲကပြန်ထုတ် ရေးသကွာဆိုပြီးရေးတော့တာဗျို့”(ရယ်သံ)
“ခင်ဗျားအဲဒါ သတိထား စာပိုးကိုက်တာဆိုးသနော်”
ဒါပေမယ့်ရေးစရာတွေက ရင်နဲ့မဆန့်အောင် ဖြစ်လာတော့တာမို့
“မြသန်းစံ ‘ခံ’ ခဲ့ရသည်များ…..(၁)
ဘဝမှာလိမ့်နေအောင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာ မမေ့နိုင်စရာတစ်ခု ကတော့ “ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းခင်း” သီချင်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်နယ်မြေမှာ KNU တပ်မဟာ(၆)
က ဦးသမူဟဲကြီးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေ အလင်းဝင်ကြတယ်။
အဲဒီတုံးက အလင်းဝင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတဖက်က မကြိုက်လို့ထင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက “လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်ခြင်း” ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အစားထိုးပေးလိုက်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေသွားကြပြီး
ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းတွေ့ကြ နှုတ်ဆက်ကြ အခမ်းအနားတွေလုပ်ကြနဲ့ပေါ့။
ဇော်ဝမ်း၊ဂျက်မြသောင်းတို့ ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကလည်း
ပြီးပြီးရောဆိုပြီး ကမန်းကတမ်းချုပ်ကြတဲ့ ဈေးချုပ်တွေပေါ့။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကို ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက မြသန်းစံကိုလည်း
ခရီးကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ အစ်မကြီးအဆိုတော်ဒေါ်တင်တင်မြ ကျွန်တော့်အိမ်ရောက်လာတယ်။လက်ထဲမှာသတင်းစာဆောင်းပါးတွေကိုင်လို့။အဲဒီအချိန်တုံးကဒေါ်တင်တင်မြ ကမြန်မာ့အသံမှာ ဂီတညွှန်ကြားရေးမှုးတာဝန်ယူထားတာ။
အစ်မကြီးနဲ့ကျွန်တော်က ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးသား။မြဝတီရုပ်သံမပေါ်ခင်က ကျွန်တော်မြန်မာ့အသံကိုချောင်းပေါက်မတတ်သွားခဲ့ရတာ။
မြန်မာ့အသံတီးဝိုင်းနဲ့ စတူဒီယိုကို၂၄နာရီဖွင့်ပြီး အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေပါကြောင်း သီချင်းရေးရမယ့်အချက်အလက်တွေက ဒီသတင်းစာဆောင်းပါးတွေထဲမှာပါတဲ့အကြောင်း မရပ်မနားပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအစ်မကြီးကိုသနားနေမိတယ်။သူ့ခမျာလည်း
“အစ်မကြီး ဒါဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရေးခိုင်းတာမဟုတ်လား အဲဒါဆိုရင်ရပြီ။
ကျွန်တော် ခါတိုင်းသွင်းနေကျAurora တီးဝိုင်းနဲ့ပဲ အိုအေစစ်စတူဒီယိုမှာသွင်းမယ်။ အချိန်တော့နည်းနည်းယူအုံးမှဖြစ်မယ်။ခရီးရောက်မဆိုက်
“ရပါတယ် အစ်မကြီး ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။အစ်မကြီးအဆူမခံစေရဘူး။စိတ်ချ”
၂ရက် ၃ရက်လောက်ကြာမှ သီချင်းကသံစဉ်အကြမ်းနှင့်စာသားတွေရတော့တယ်။
ဒီသီချင်းက country style ဆိုတော့ ကျောင်နေဖက်သူငယ်ချင်း ကိုခိုင်ထူး ကိုအကူအညီတောင်းတော့ သူကလည်းကူညီပါတယ်။
သူဆိုရတာ ထောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာ စာသားတွေပြင်ရဖြတ်တောက်ရသေးတယ်လေ။
ကျွန်တော်သီချင်းတွေရေးတိုင်း2version လုပ်လေ့ရှိတော့
ဒီသီချင်းအတွက် ကရင်တိုင်းရင်းသူ အဆိုတော်လေးလေးဝါး
ရိုက်ကူးရေးအဆုံးedit ပြီးတဲ့အထိ ကိယ်တိုင်လုပ်ရမှကျေနပ်တာ။crazy သမားတွေဆိုတာဒီလိုပါပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာမြန်မာ့အသံကနေ ခဏ ခဏဖုန်းဆက်တယ်။
By the way – အဲဒီမှာတင်ကြည့်
ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားအပေါ်ထပ်တူနားလည်ခံစားနိုင်ရမယ်။ဒီသီချင်းကိုနေ့စဉ်နားထောင်ကြရတော့မယ့်ပြည်သူတွေရဲ့နားရွက်တွေနဲ့ ရုပ်သံကြည့်နေကြရမယ့်သူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအားနာတတ်ရမယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ဒါတွေကိုသဘောပေါက်တယ်။
သူရေးခိုင်းခဲ့သမျှသီချင်းအားလုံးကို ဘယ်တော့မှအချိန်မကန့်သတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုblank cheque ပေးထားတယ်။pressureမပေးဘူး။
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ကြားက relationshipကိုပဲမြင်အောင်ပြောပြတာပါ)
ဒါပေမယ့်စစ်အလေ့အထတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာသူတွေဟာဝန်ကြီးတွေဖြစ်လာလို့ public relationsတွေလုပ်ရတဲ့အခါစစ်အလေ့အထ တွေကခေါက်ရိုးကျိုးခဲ့တော့ အဲဒီအကျင့်ကိုတော်တော်နဲ့ပြင်မရချင်တော့ဘူး။
(မနက်ဖန် အပိုင်း ၂ ဆက်ရန်)………
အီးဘုတ်​ ရရင်​ ဖတ်​မလား​တွေးတယ်​
တ​လော​လေးကပဲ စာ​ပေတိုက်​အ​တော်​များများ သတိ​ပေးစာ ထုတ်​ထားတာ ဆို​တော့
ငယ်​တုန်းက​လောက်​ သူ့အ​ပေါ် စိတ်​မဝင်​စားမိ​တော့တာ​တော့ အမှန်​
(ငယ်​တုန်းက သူ ဘုန်းမီး​နေလ ​တောက်​ပချိန်​ကိုး ​​ဗျ)
.ကိုဘလက်ပို့စ်ဖတ်ရင်း ၀ိုင်းမန့်ကြတဲ့ ကွန်မန့်ကောင်းလေးတွေပါဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ